Puntland oo dagaal ku qabtay maxaabiistii laga daayay Xabsiga Boosaaso - Awdinle Online
Ciidamo ka tirsan kuwa difaaca Puntland iyo Xubno kamid ah Al-Shabaab ayaa dagaal xoogan waxaa uu ku dhex-maray dhulka Buuraleyda ah ee Gobolka Bari, kadib markii Ciidamada Puntland ay weerareen.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Puntland ayaa waxaa ay Warbaahinta u sheegeen in Ciidamada ragga ay dagaalka la galeen ay ahaayeen kuwii soo weeraray Xabsiga Dhexe ee Magaalada Boosaaso, isla markaana ay ka dileen in ka badan 20 xubnood Afar kalena ay gacanta uga dhigen.
War kasoo baxay Ciidamada Difaaca Puntland ee PSF ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in Ciidamada ay dib gacanta ugu soo dhigeen qaar kamid ah Maxaabiistii ay Al-Shabaab kala baxeen Xabsiga Boosaaso kuwo kalena ay ku raad joogaan.
“Ciidanka Amniga Puntland waxay soo afjeereen intii badnayd Cadowgii soo weeraray Xabsiga Magalada Boosaso. ciidanka waxay gacanta ku dhigeen maxaabistii ay rabeen alshabab iyo daacish inay la baxsadan, Sidoo kale Cadowga ummamada Soomaliyeed ee Alshabab laga dilay in kabadan 20 dagaalyano waxaana laga qabtay 4 maxaabis ayaa lagu yiri” War kasoo baxay Ciidamada PSF.
Al-Shabaab ayaa War kasoo baxay waxaa lagu sheegay in xabsiga Boosaaso ay ka siidaayeen in ka badan 400 oo Maxbuus, kuwaas oo qarkood ay kujireen Xubno ka tirsan Al-Shabaab, hayeeshee Puntland ay sheegtay in qar kamid ah Maxaabiista ay dib u soo qabteen.
Next articleTurkiga oo ka hadlay qarixii xalay ka dhacay Magaalada Muqdisho